तपाइँ सामाजिक मिडियालाई कम महत्त्व दिदै हुनुहुन्छ Martech Zone
तपाइँ सामाजिक मिडियालाई कम महत्त्व दिईदै हुनुहुन्छ
आइतबार, अगस्त 15, 2010 आइतबार, अगस्त 15, 2010 Douglas Karr
राउन्डपेगले हालसालै एक सोशल मीडिया सर्वेक्षण गर्‍यो र सँगै एक शानदार राख्यो whitepaper परिणाममा। मैले पृष्ठहरू पढ्ने बित्तिकै नतिजामध्ये एकले मलाई झकझक्यायो। धेरै सर्वेक्षण गरिएको व्यवसाय मालिकहरूको %०% सामाजिक मिडिया भने १०% वा कम उत्पन्न गर्दछ तिनीहरूको कुल व्यवसाय को।
सत्यमा, म यी ग्राहकहरु लाई थाहा छैन सामाजिक मीडिया को लागी तिनीहरुको व्यापार मा कत्ति असर थियो। जब म सामाजिक मिडिया संसाधनहरूबाट प्रत्यक्ष अनुरोधहरू हेर्छु, मेरो सोशल मीडिया कम्पनीले केहि सीसा उत्पन्न गरेको छ। तर त्यो वास्तविक तस्वीर होइन। मलाई थाहा छ कि मसँग सम्भावितहरू छन् जसले मलाई कल गर्नु भन्दा अघि अनलाइन अनुसन्धान गरे। गत वर्षमा भएको सबै लीडहरू मध्ये, त्यहाँ मात्र २ हो जुन मलाई अनलाइन भेटिएन भन्ने सीधा शब्दहरू थिए।
जे होस्, ती दुई मध्ये, तिनीहरूले वास्तवमै मसँग कुरा गरे किनभने व्यक्ति उनीहरूले मेरो बारेमा फेला पारे संलग्न भएको थियो मसँग सोशल मिडियामा। त्यसोभए ... सामाजिक मिडिया प्रभावको प्रश्नको उत्तर दिन दुई तरिकाहरू छन्:
तपाईं सोशल मिडियाबाट कुन प्रतिशत लिडहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ?
तपाइँको नेतृत्वको कुन प्रतिशतले तपाइँलाई सोशल मिडिया मार्फत अनुसन्धान गर्‍यो वा तपाइँलाई तपाइँको विस्तारित अनलाइन सामाजिक नेटवर्क मार्फत फेला पार्‍यो?
# १ को जवाफ कम छ, मेरो लागि पनि! # २ लाई उत्तर १००% छ। प्रदान गरियो,aको रूपमा सामाजिक मिडिया एजेन्सी, हामी एक अपवाद हो। जे होस्, म शर्त लगाउन तयार छु कि तपाईंको धेरै जसो नेतृत्व भित्र आउँदैछ तपाइँलाई अनलाइन अनुसन्धान गरेको छ - तपाईंको सामाजिक नेटवर्क भित्र सहित। यसको मतलब यो हो कि सोशल मिडियाले तपाइँको सबै व्यवसायलाई चलाइरहेको छैन, तर यसले तपाइँको व्यवसायलाई असर गरिरहेको छ।
सोशल मिडियाले अन्य अवसरहरू पनि खोलेको छ - सार्वजनिक बोल्ने व्यस्तता सहित र लेख्ने सहित ब्लगि book पुस्तक। ती बोल्ने सगाईले नेतृत्व ल्याएको छ ... र म पनि अनुमान गर्दैछु किताब पनि। त्यो सबै मैले सामाजिक मिडियामा राखेका प्रयासहरूबाट आएको हो।
जब तपाइँले अवसर पाउनुहुन्छ, तपाइँको नेतृत्व सोध्नुहोस् कि उनीहरूले तपाइँ मार्फत अनलाइन अनुसन्धान गरे खोज, सामाजिक मिडिया, वा तिनीहरूको व्यापार नेटवर्क भित्र। मेरो अनुमान यो हो कि तपाईं परिणामहरूमा छक्क पर्नुहुनेछ!
SEOmoz सबै SEO अनुप्रयोगको आमा रिलिज गर्दछ
अगस्ट,, २०१ 15 2010:२१ अपराह्न
तपाईंले वास्तवमै चाखलाग्दो बिन्दु छोड्नुभयो। धेरै साना व्यवसाय मालिकहरूलाई वास्तवमै थाहा हुँदैन तिनीहरूका व्यवसाय कहाँबाट आउँदछ। उदाहरण को लागी। म रेनमेकर कार्यक्रममा कसैलाई भेट्छु। तिनीहरू ग्राहक बन्न सक्दैनन्, तर तिनीहरूले मलाई कसैसँग परिचय दिन्छन्, जसले मलाई गर्ने जसले मेरो परिचय दिनुहुन्छ…। तब म बिर्सिएको छु कि मूल कनेक्शन रेनमेकरहरूबाट आएको हो।
वा मेरो सम्झौता क्लाइन्टहरू जसले मलाई उनीहरूले पहेलो पृष्ठहरूबाट व्यवसाय प्राप्त गर्न भनेर भन्छन्, तर किन सबै कम्पनीहरू बाहिरका ग्राहकले उनीहरूलाई बोलाउँथे भनेर कहिल्यै नसोध्नुहोस्। सामान्यतया, यो किनभने उनीहरूले कम्पनीको बारेमा सुनेका थिए, र उनीहरूको फोन नम्बर खोजिरहेका थिए।
प्रत्येक व्यवसाय मालिकले यो प्रश्न बारम्बार सोध्नुपर्दछ, यदि उनीहरू जान्न चाहन्छन् कि उनीहरूको कुन मार्केटिंग गतिविधिहरू वास्तवमै काम गरिरहेछन्।